Bonke abantu ukwazi amavithamini, kodwa bambalwa bazokwazi ukusho kahle, ukuthi. Igama elithi "Vitamin" livela Latin vita, okusho "ukuphila." Wonke umuntu kumele bazi lezi zinto ezibalulekile lapho abantu kungaba abantu banempilo futhi bajabule. Uma ngaphambili lwezifundo zesikole ekilasini ukutadisha biology amavithamini engasebenzi isikhathi eside kakhulu, kodwa namuhla ezikhungweni zemfundo abasemazingeni ahlukahlukene kancane, sekuqala ukuvela ku isihloko ezithakazelisayo izincwadi ngokwanele, ngezinye izikhathi uthisha ulungiselela uhlobo sifundo isethulo. Amavithamini sibonga bafundzi kalula njengoba umuntu ezibukwayo ifunda ukwaziswa okwengeziwe okuwusizo kuka ukuzwa.
Ngakho, amavithamini kukhona izakhi ezibalulekile eziphilayo ukuthi, lokuba yilungu leqembu lezinhloli izinhlobonhlobo zokudla, ukukhiqiza umzimba wonke lamakhono abalulekile ukuze umzimba efanele. Bona akuthuthukisi nje izivikeli mzimba zomzimba, kodwa futhi kuphazamise inqubo namachibi nokushwabana. A omningi izakhi ezitholakala izithelo, imifino kanye amajikijolo. Yingakho ngo entwasahlobo nasehlobo isikhathi kubaluleke kangaka njengoba kungenzeka ukusebenzisa iningi imikhiqizo ukudla ngenhla. Uma kulezi zikhathi, abantu baba nethuba ukudla imifino eliningi eyanele, khona-ke ekwindla nasebusika kwanele Vitamin izinqolobane. Ukuze abonise le nentsha ezinjalo izinto owaziwa, namuhla babesebenzisa uhlobo yokufunda, njengoba isethulo. Amavithamini - kuba indaba uvundile impela kangcono izifundo ngosizo ikhompyutha isethulo imiqulu ezimibalabala.
Siyabonga ekuthuthukiseni ubuchwepheshe bama-computer kungenzeka ukuthuthukisa isethulo eliphezulu ngale ndaba, futhi ochwepheshe ezikhethekile amafemu ukukusiza kule wonke umuntu. Ngaphezu kwalokho, abafundisi kanye abafundisayo ungenza yakho yevidiyo isethulo ne ngeso ephelele isihloko oyifunayo. Njengoba azibonayo ulwazi ukuzwa amavithamini abafundi kanzima ngokwanele, ngakho ukunikezelwa kwama-"Vitamin" Kuphoqelekile kufanele ibe imidwebo, amabhlogo, amashadi, alalelwayo nokusekelwa vidiyo. Lokhu kuzovumela ukusetshenziswa zonke izinhlobo inkumbulo yomuntu futhi ngokugcwele ngangokunokwenzeka ukumsiza e nokwenziwa ulwazi olusha.
Zonke amavithamini zihlukaniswe amaqembu amabili amakhulu - kuba ungaphumi lapho ifakwa emanzini futhi amavithamini fat-encibilikayo. Iqembu sokuqala lemisuka okuyinto awela umzimba nge ukudla, kodwa ayogcinwa kuyo. Ngenxa yalesi sizathu, amavithamini amanzi-encibilikayo kufanele wenze zonke izinsuku, futhi okungenani ukwelashwa ukushisa. Amanzi encibilikayo amavithamini isethulo okuhlanganisa ulwazi mayelana amavithamini yeqembu C, inombolo iqembu (B1, B2, B6, PP (B3), B12), bioflavonoids (P), i-folic (B9) kanye pantothenic acid (B5), ukuvumela umzimba ukuthola ngokwanele izakhi ezibalulekile ngendlela kalula digestible.
Ngokuqondene iqembu amavithamini yesibili, khona-ke lokhu kufaka uvithamini A (retinol), amavithamini yeqembu E, D, kanye K. I amavithamini fat-encibilikayo, ukuziletha neliyoba ubavumele ukuba lula ukuqonda isidingo ukusiza umzimba ekwazi ukumelana esanele negative izici zangaphandle ngesimo izifo ezithathelwanayo nezenhliziyo ahlukahlukene. Ekubhaleni ekudleni kubalulekile ukuze ulifake ukudla anamavithamini womabili la maqembu, njengoba nje eliphezulu kanye nokudla okunomsoco ivumela umuntu ukuthola zonke izincwadi ezidingekayo ngendlela kufinyeleleke futhi ngobungako kwesokudla.
Presentation "Amavithamini" kuvumela abafundi ukuba bafunde ewusizo futhi ezidingekayo imiqondo ekuphileni. Esikhathini esizayo, lolu lwazi kuzosiza abantu abasha ukuba kahle futhi ephumelelayo ukuhlela ukudla kwabo futhi izingane zabo esizayo, futhi ngaleyo ndlela ukuqeda izifo eziningi ezihlobene amavithamini noma ukungalingani emzimbeni.
Indlela tie kerchief ekhanda, entanyeni, okhalweni, nezingubo zaso zangaphandle
"Beeline Pro 3": ukubuyekezwa kanye izici